Ahoana ny fanentanana ny fitomboan'ny volo - Beauty
Dia Singam-Bolo Fampihenan-Danja Ao An-Tokantrano Vaovao Momba Ny Lamaody Ny Adin-Tsaina Ahoana No Beauty Bridal Levitra Fanafody An-Trano Fahalalana & Fanabeazana
Ahoana ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny volo (Satria tena very ny volo mifandraika amin'ny areti-mifindra)
Tsia, tsy ianao irery-na ny eritreritrao. Ny fihenan'ny volo vokatry ny fihenjanana dia nisondrotra tamin'ny taona lasa. (Araka ny Google, ny salan'isa isan'ny fikarohana momba io lohahevitra io dia mihoatra ny 829.000 isam-bolana any Etazonia fotsiny.)
Ankoatra ny fitadiavana fomba madinidinika hampihenana ny adin-tsaina amin'ny andronao, dia misy zavatra maromaro azonao atao mba hahatonga ny volonao ho amin'ny toetry ny fitomboana mandritra ny fotoana iarahanay mivoaka ity hetsika maelstrom ity.
Mifandraika: Nahita Trichologista momba ny voloko manify aho talohan'ny mariazako - Ity no nianarako
1. Tsarovy ny hodi-dohanao
Tsotra izany toy ny maka minitra fanampiny vitsivitsy hanorana ny hodi-doha isaky ny manasa volo. Asio shampooo amin'ny kofehy lena ary ampiasao ny pads amin'ny rantsantananao (na iray amin'ireo firavaka ireo mpanotra loha ) ary ataovy ao anaty hodi-doha amin'ny tsindry maivana. Izany dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ny fivezivezena sy famporisihana ny fikorianan'ny rà mankany amin'ilay faritra, ary hanome anao madio madio kokoa, izay lakilen'ny fahasalamana sy ny fitomboan'ny volo amin'ny ankapobeny.
2. Manandrama minoxidil loha-hevitra
Amin'ny maha fitsaboana tokana ankatoavin'ny FDA ny fitomboan'ny volo, ny minoxidil dia miasa amin'ny alàlan'ny fanitarana ny dingan'ny fitomboana (aka ny dingana anagen) ny volo ary ny fampitomboana ny haben'ny fololola. Ny fampitandremana? Mila maharitra ianao - ary mahareta. Mety haharitra efa-bolana ny fampiasana isan'andro alohan'ny hanombohanao mahita valiny, ary raha tsy mampiasa azy intsony ianao, dia mety hiverina ny fihenan'ny volo.
ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana sakafo hariva sakafo hevitra
3. Diniho ny fanampiana
Amin'ny maha-Dr. Sophia Kogan, mpiara-manorina ary Lehiben'ny mpanolotsaina mpitsabo an'i Nutrafol, nozaraina taminay tamin'ny fiandohan'ity taona ity: noho ny fiparitahan'ny vokatra azontsika, 'marihina tsara fa tsy ny vitamina sy ny famenon-tsakafo rehetra no foronina mitovy, noho izany dia te hijery akaiky ny fizarana, ny kalitao ary ny fatran'ny akora ao anatin'ireo vokatra azonao mihinana.
Ireo akora fanamarihana vitsivitsy: biotine, saw palmetto, colloly hydrolyzed, antioxidants, solika rongony ary tocotrienols. (Iray amin'ireo mpampanonta anay mianiana amin'i Viviscal , milaza fa mahatonga ny ponytail hahatsapa ho lehibe kokoa.)
Aza adino fa afaka manampy ny famenon-tsakafo MANAMPY ny fitomboan'ny volo ary manampy amin'ny fananganana volo salama kokoa, saingy tsy afaka mamerina amin'ny laoniny ny fololika maty. Tsy misy afaka. Izay vokatra milaza fa manasitrana ny fihenan'ny volo mandritra ny alina na herinandro maromaro dia tokony hojerena amin'ny fisalasalana, hoy i Kogan.
4. Topazo maso ny haavon'ny otrikaina D.
Raha mahatsikaritra fandatsahana bebe kokoa noho ny mahazatra ianao dia mety te hijery akaiky ny sakafonao: ny tsy fahampian'ny vitamina D sy ny tahan'ny vy ambany no mety ho vokatr'izany. Andramo asiana sakafo be dia be vitaminina D ao amin'ny loviao (toy ny salmon sy atody; na holatra sy ronono soja raha tsy mihinan-kena ianao) na mandinika famenon-tsakafo isan'andro.
ny fomba mijery sarimihetsika an-tserasera amin'ny namana
Abby Hepworth / Getty Images
5. Fitsaboana ao amin'ny birao
Manomboka amin'ny fitsaboana laser mankany amin'ny microneedling sy PRP (aka fitsaboana solon'ny platelet), misy safidy maromaro ao amin'ny birao azonao andramana amin'ny fitomboan'ny volo. Satria fampiasam-bola lafo vidy ity, diniho ny fanandramana andrana ataon'ny dermatologista anao hamantarana aloha ny (ahem) fototry ny fihenan'ny volo alohan'ny hanaovanao drafitra fitsaboana.
6. Asio menaka voanio
ny menaka malala manana fampiasa betsaka ary afaka manampy ny volonao. Araka ny fanazavan'i Dr. Steven Shapiro, dermatologista voamarina amin'ny birao ary mpanorina ny Shapiro MD: ny menaka voanio dia feno asidra lauric, asidra matavy izay, tsy toy ny asidra matavy hafa, afaka miditra lalina ao amin'ny volo. Vokatr'izany dia afaka miaro ny volo amin'ny fahaverezan'ny proteinina izy io ary manome hamandoana maharitra.
Ankoatry ny maha-moisturizer tena tsara azy dia afaka manampy amin'ny ady amin'ny fivontosan'ny manodidina ny volon'ny volonao koa izy io, izay iray amin'ireo mpitranga matetika ambadiky ny fihenan'ny volo, hoy i Shapiro.
Ampiasao ho toy ny sarontava volo roa na intelo isan-kerinandro. Mba hanaovana izany, manafana tsotra izao ny menaky ny voanio ary apetaho amin'ny volo maina, amin'ny fampiasana tohotra nify malalaka hizarana mitovy ny menaka, manomboka eo afovoan'ny volonao ary hitohy hatramin'ny farany. Raha mila fitsaboana haingana dia avelao izy mandritra ny 30 minitra, avy eo shampooing ary arotsaho toy ny mahazatra ny volonao. Ho an'ny hydration fanampiny, avelao izy mandritra ny alina miaraka amin'ny volonao fonosina ao anaty satroka fandroana na landy. Avy eo, mandro sy shampoo amin'ny maraina.
Sofia Kraushaar ho an'ny PureWow
7. Na andramo menaka sakamalao
Na dia tsy mbola ampy aza ny fikarohana natao tamina definitively hoe menaka sakay afaka manampy amin'ny fitomboan'ny volo azo antoka, nisy fanadihadiana vitsivitsy nampanantena. Ny fandinihana Koreana iray tamin'ny 2014 nampiasa totozy dia nahita fa ny menaka dipoavatra dia nitombo ny fitomboan'ny volo noho ny minoxidil, fitomboan'ny volo fantatra amin'ny anarana hoe Rogaine izay nankatoavin'ny FDA.
Ankoatra ny fitomboan'ny volo, ny menaka dia mety hahasoa raha ny volonao dia eo amin'ny lafika misy menaka. Fa maninona Izy io dia afaka manadio sy manazava ny volo nefa tsy esoriny ny menaka voajanahary ao aminy, ary mandanjalanja ny famokarana sebum ao an-doha, izay mamela ny volo hiditrao nefa tsy milanja azy.
inona no hatao raha very volo
Fitandremana iray: ny karazana menaka sakay mampiasa raharaha ianao. Ny dikanteny tsy voapoizina (toy ny menaka tena ilaina) dia mety ho henjana be amin'ny hoditrao ary hiteraka fahatsapana mirehitra. Raha miasa amin'ny menaka sakamalaho madio ianao dia ataovy izay handraraka azy amin'ny menaka mpitondra toy ny menaka voanio, menaka oliva na menaka avokado alohan'ny hampiasana azy amin'ny hoditrao.
8. Asio menaka voa mainty
Antsoina koa hoe komina mainty na nigella sativa, ny menaka voa mainty dia heverina fa hamerina amin'ny laoniny ny fitomboan'ny volo amin'ny faritra manify noho ny fatran'ny thymoquinone, antihistamine mahery. Yep, ny antihistamines dia matetika omena an'ireo marary alopecia hanampy amin'ny fitomboan'ny volo, ary hahazoana izany, tena menaka tena ilaina io.
Midika izany fa tsy matevina toy ny oliva na menaka voanio, ary nanampy tombony ara-pahasalamana. Midika koa izany fa 100 isan-jato menaka voa tsy madio sy tsy voadio ary voadio mangatsiaka no tsy maintsy soloina ao anaty menaka mpitatitra iray hafa (toy ny voanio na oliva), satria mahery samirery loatra izy io. Ary rehefa afangaro dia azo ampiasaina mivantana amin'ny hodi-doha hampihenana ny fivontosana, handrisika ny fitomboan'ny volo ary hampihena ny hafanana sy ny fahatsapana.
ny vatolampy sy ny vadiny
9. Na manandrana menaka voaloboka
Ny menaka voaloboka dia lasa foto-tsakafon'ny vondrom-piarahamonina hatsaran-tarehy satria tsy misy fofona, tsy misy lanjany ary mirehareha famaranana mazava izay mety amin'ny karazana volo na hoditra.
Saingy afaka mampitombo ny volonao haingana kokoa ve izy io? Eny ary tsia. Fitsapana Japoney iray no nanandramana an'io teôria io tamin'ny totozy, saingy tsy dia misy fandinihana olombelona milaza fa manampy amin'ny fitomboan'ny volo ny menaka grapeseed. Na izany aza, ireo singa hita ao anaty menaka dia manondro fa mety ho azo atao izany. Menaka voaloboka manana ny fahafaha-manampy amin'ny volo salama amin'ny ankapobeny, hoy i Ebony Clark-Bomani, mpampianatra cosmetolojika & mpampianatra vokatra ho an'ny The Mane Choice.
Nasongadiny fa ny menaka dia misy antioxidants sy asidra matavy omega-6 izay naseho fa mampitombo ny fitomboan'ny volo. Ireo akora fototra toy ny asidra linoleic, polyphenols, oligomeric proanthocyanidins (aka OPCS) ary vitamina E dia mandrisika ny fivezivezena, manatsara ny elastika ary manamboatra collagen.
10. Ary aza adino ny menaka castor
Ny menaka Castor dia misy asidra matavy omega-6 sy omega-9, izay samy ilaina amin'ny famporisihana ny fitomboan'ny volo salama. Izy io koa dia mandaitra amin'ny fitsaboana dandruff, satria manana toetra mampiavaka ny bakteria sy antifungaly izy io. Voahosotra ao anaty hodi-doha, mando be izy ary afaka manampy amin'ny fampiroboroboana ny fivelarana.
Mifandraika: Manontany stylist izahay: Inona no mahatonga ny fahatapahan'ny volo ary ahoana no fomba hitondrako azy?
Sokajy Haingo Boky Fahasalamana Ara-Tsaina
Resipeo momba ny Kabocha Squash 20 raha mbola amin'ny vanim-potoana izao
Fihenan-ketra 9 Tokony ho fantatry ny tompon-trano rehetra momba izany
Te hifindra amin'ny amboaran-jaza? Ireo 3 no tsara indrindra amin'ny Amazon
Lalao Halloween 30 ho an'ny ankizy izay mitazona ny biby goavam-beo
Ny karazana borosy rehetra amin'ny makiazy, hazavaina ihany amin'ny farany
Ny 50 Recipe Burger lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao
Mampiasà mpahitsy volo tsy misy tariby handaminana ny manaonao amin'ity fahavaratra ity
Ity ny famerenako ny marina momba ny 'Aza Lazao i Neny fa Maty ny Mpitaiza' (30 Taona tara loatra)
Hevitra 12 nananan'i Neny teo am-pijerena ireo ‘présents de bachelor: henoy ny fonao’
Ny toerana tsara indrindra hipetrahana Champagne any New York
Hihaona amin'ny Young Sunshine an'ny Internet, Princess Amreen Malhotra
Ny Serum vitamina C 11 tsara indrindra ho an'ny hoditra marevaka kokoa
Anontanio The Expert
Fandaharana fahitalavitra 17 tsy dia mahaliana loatra (na mankaleo saina)
30 Iconic Marilyn Monroe dia nalaina tamin'ny laza, fitiavana ary fiainana
Shailene Woodley dia mandefa ny taona 60 amin'ny tranokala Vaovao 'The Last Letter From Your Lover' an'ny Netflix
Manoratra momba ny lamaody hivelomana aho, ary io ihany no akanjo tiako hotratrarina amin'ity fahavaratra ity
Collars sy harnesses amidy 10 be mpividy indrindra ao Amazon
fanafody an-trano ho an'ny fifehezana ny volo sy ny fitomboana indray
fanafody an-trano ho an'ny volo latsaka sy maina volo
ny fomba fampiasana soda amin'ny tarehy
kathryn newton mpampianatra ratsy
fampisehoana toy ny anatomie grey
fampiofanana fototra ao an-trano
mahagaga tetika ho an'ny ankizy ao an-trano mba hanao